I-Nfortec, iimeko kunye nabalandeli bokusebenza kobungcali kwiPC yakho | Iindaba zeGajethi
INfortec, iimeko zomsebenzi oqeqeshiweyo kunye nabalandeli bePC yakho
UMiguel Hernandez | | ngokubanzi, Imiboniso
INfortec yinkampani entsha yaseMurcian esele izelwe ngenjongo yokubonelela ngezinto zePC ezibonelela ngokusebenza okuphezulu ngamaxabiso afanelekileyo. Ngale ndlela, siya kufumana kwiikhathalogu zayo zeemveliso ezinjengezinqaba, iifeni kunye neeheatsinks, eziza kubonelela ngokusebenza okuphezulu. Besikulo msitho wokubonisa waseNfortec eMadrid kwaye sifuna ukukuxelela ukuba zithini iimvakalelo zethu xa usazi iimveliso esizivelisiweyo. Iimveliso ezinophawu olucacileyo, apho ukusetyenziswa kunye nokusebenza ngokubanzi kwePC kusebenza, njengoko besixelele. Siza kufunda malunga nale mveliso intsha evela kwinkampani yaseSpain iNfortec.
1 Towers ukugubungela zonke iimfuno zakho
2 Ukunikezelwa kwamandla yintsika ebalulekileyo
3 Iheatsinks kunye nabalandeli, ukupholisa iflegi
Towers ukugubungela zonke iimfuno zakho
Ngexesha lomsitho, sikwazile ukungqina ngokugcweleyo kwiinqaba ezintathu eziphambili uNfortec anazo kwikhathalogu yakhe IScorpius, la Pegasus kunye Perseus.
Iscorpius: Phambi kwakhe, sifumana inqaba yePC eyakhiwe kwizinto ezisemgangathweni ophezulu kwaye iyilelwe kwaye yeyona inzima kakhulu, kwinqanaba lezemidlalo nakwimeko yobungcali. Imilimitha nganye yebhokisi icingelwe yona kwaye yenzelwe yona. Sifumana i-chassis yensimbi kunye ne-aluminium yokuthambisa ehamba ngokufanelekileyo nesinki sobushushu. Kwiphaneli engaphambili siza kuba neglasi enobushushu obuyi-millimeter ezine, umba owahlukileyo kwezinye iibhokisi zokugqibela, ubukhulu bazo buncinci kakhulu. Kodwa ayisiyiyo yonke into ehleli apha, ulungelelwaniso lwee-bay kunye ne-chassis kule 450 x 215 x 470 mm tower ziya kusivumela ukuba "sifihle" iintambo kwaye senze icala libe nomtsalane kangangoko. Ngee-studs zerabha ezinceda ukunciphisa ukungcangcazela kunye nophambili olula, sinokonwabela amazibuko e-4 e-USB kunye negalelo lodumo kunye neziphumo.
Pegasus: Isisiqingatha phakathi koncedo nolusebenzayo, i-chassis yentsimbi entsha, egqunywe licala lealuminium kunye nenxalenye ephezulu. Ngaphambili sine-ABS eguqukayo. Yonke ikona yale bhokisi yenzelwe ukupholisa, kodwa ngaphandle kokulibala ngobuhle. Sine-7 PCI yokunyuselwa kwiindawo ezinobungakanani be-460 x 205 x 495 mm kunye nenxalenye ephezulu ene-4 ye-USB kunye negalelo lomsindo kunye namazibuko okuphuma. Ukuhambisa umoya, abalandeli abathathu be-12cm.
Perseus: Kule bhokisi simangalisiwe sisilayidi somoya esinecala esikhanyiswe ngee-LED, oko kukuthi, yenzelwe ukugqitywa kwe-aluminium encinci. Kwakhona, kubandakanya abalandeli abanezibane ze-LED, 3 amazibuko aphezulu e-USB ukuze ube nayo yonke into ezandleni zakho kunye nomfundi wekhadi, kunye negalelo lokumamela kunye neziphumo. Zonke zikwi-450 x 205 x 493mm ehamba nobuncinane be-3 12cm yabalandeli.
Ukunikezelwa kwamandla yintsika ebalulekileyo
Elinye lamacandelo apho i "gamer" ihlala inamathela ekubalulekeni, kodwa kuya kufuneka ulumke ngombane. KwiNfortec bayayazi kwaye yiyo loo nto sisebenze ukubeka imithombo esemgangathweni kwizandla zethu, ezinamanqanaba amabini aphambili, Isikhohlela Wired kunye Iimodyuli Scutum. Yenziwe ngaphandle kokukhangela kumacandelo, sifumana ukusuka kwi-650W ukuya kwi-750W kwimodeli yeemodyuli, kunye nezatifikethi ezingama-80 kunye neBronze kulo lonke uluhlu, oluqinisekisa ukusetyenziswa kwezinto ezisemgangathweni ophezulu kunye nokhuseleko oluphezulu kumacandelo ethu.
Kwimeko yeScutum Wired sinokugcina kancinci, ukubala 650W kunye nesiqinisekiso se-80 Plus seBronze, kodwa asinakulibala fan yayo efanelekileyo 14cm eziya kuhamba kunye kwaye zichithe ubushushu balo mbane ngendlela efanelekileyo.
Iheatsinks kunye nabalandeli, ukupholisa iflegi
E-Nfortec abaphulukani nembono yokuchithwa nokuba, yiyo loo nto bebeka uluhlu Vela, kunye nemodeli yeMX kunye neKX. Eyokuqala yeemodeli zibonelela ngombhobho wobhedu ophindwe kabini Ikhatshwa ngumlandeli omkhulu othuleyo we-14cm, okhoyo kuphela kuluhlu oluphezulu lweeheatsinks. Ukufakwa kwayo ngokulula kuya kothusa kwaneyona inzima. Ngeemfuno ezincinci bakwabonelela nge- Ikhandlela KX, i-heatsink eneempompo ezine ezisekwe kubhedu kunye nomnye fan omkhulu.
Kwelinye icala, uthotho Akwila Isinika abalandeli bobukhulu obahlukeneyo, sikhatshwa yimitya yesilicone eqinisekisa ukuthula esithi "sithanda ukukuva" kakhulu. Okokugqibela, uncamathiselo olushushu lubizwe V382 kunye nokuhamba okuphezulu kobushushu, okuthintela ukuhanjiswa kwee-elektronon ukusuka kwiprosesa ukuya kwi-heatsink.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » INfortec, iimeko zomsebenzi oqeqeshiweyo kunye nabalandeli bePC yakho
IMotorola iya kukhupha iiModyuli zeMoto ezintathu rhoqo emva kweenyanga ezintathu
IMicrosoft yehlisa ixabiso leXbox One de kube nguDisemba 30